Raw IDFP vatengesi (615250-02-7) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Fat Kurasikirwa poda / IDFP (615250-02-7)
Rating: SKU: 615250-02-7. Category: Fat Kurasikirwa poda
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukuraira kweDFFP (615250-02-7), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
IDFP Basic Characters:
Molecular Kurema: 294.391
IDFP (615250-02-7) purogiramu
Makemikari Mazita: ISOPROPYL DODECYLFLUOROPHOSPHONATE
IDFP (615250-02-7) Kushandisa
IDFP inhengo yeophophophophophorus inoenderana neiyo nerve mumiririri sarin. Kunge sarin, IDFP chinhu chisingadzoreke inhibitor kune akati wandei enzyme dzakasiyana dzinowanzo shanda kupaza maurotransmitter, zvisinei iyo refu alkyl cheni yeIDFP inoita kuti ive isina kusimba senge inhibitor yeacetylcholinesterase (AChE), iine IC50 ye6300nM chete, nepo iyo inhibitor ine simba mairi enzymes monoacylglycerol lipase (MAGL), iyo enzyme yekutanga inoitisa kudzikisira iyo endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG), uye fatty acid amide hydrolase (FAAH), iyo enzyme yekutanga inoshatisa iyo imwe huru endocannabinoid anandamide . Iyo IC50 yeIDFP iri 0.8nM paMAGL, uye 3.0nM kuFAAH. Kuvhiringidzwa kwema enzymes maviri aya kunokonzera kuwedzera kwakanyanya kweanandamide uye 2-AG muuropi, zvichikonzera kuwedzera kwechiratidzo che cannabinoid uye zvakajairika cannabinoid hunhu maitiro muzvidzidzo zvemhuka, nepo kushomeka kwesimba paAChE kunoreva kuti hapana cholinergic zviratidzo zvinogadzirwa. [1    Kunyangwe paine chimiro chakafanana chemakemikari kune anorambidzwa emitsipa, iyo refu alkyl cheni yeIDFP inokonzeresa kuti idonhe kunze kwetsananguro ye "chepfu makemikari" pasi peChemical Weapons Convention,  uye sezvo iriwo isingaratidze yakasimba AChE inhibition ye zvine chekuita neophophophophorus makomputa, IDFP haisi pasi pemitemo imwechete yakaomarara.
Ndechipi chiyero cheDFFP
Kwekugara kwenguva refu, tinopa kuti IDFP ichengetwe sezvinowanikwa pa -20 ℃. Inofanira kuva yakasimba kune gore rimwechete.
IDFP inopiwa semhinduro mu methyl acetate. Kuti uchinje gadziriro yacho, ingobuda mhepo ye methyl acetate pasi pemvura yakanyorova ye nitrogenand nokukurumidza kuwedzera yekusarudzwa kwesarudzo.Solvents yakaita ethanol, DMSO, uye dimethyl formamide yakanatswa negesi inert inogona kushandiswa. Iko kushandiswa kweDIDFP mune zvinokwana izvi zvinenge 10mg / ml.
Kana zvinodhaka zvigadziriswa zvinotarisirwa kuongororwa kwezvisikwa, zvinogona kuve zvakagadziriswa nekuderedza iyo yega yega yega muzviputi zvakanyanyisa kana isotonic saline. Kuziva kuti inosara yakawanda ye organicsolvent haina kukosha, sezvo zvinokonzerwa nehutachiwana zvingave nezvine utano hwepanyama pahutano hwakadzika. kwete kukurudzira kuchengeta aqueous solution kwezuva rinopfuura rimwe.
Iyo IDFP inoshanda sei
IDFP inhibitor isingagadziriswi yemhando dzakasiyana-siyana dze enzymes dzinowanzoshanda kuputsa maurotransmitter, asi iyo yakareba alkyl chain ye IDFP inoita kuti zvive zvisina simba sezvinoita inhibitor ye-acetylcholinesterase (AChE), nepo inhibitor inonyanya yemadziviri enzyme monoacylglycerol lipase ( MAGL), iyo enzyme yokutanga inoshandiswa pakusvibisa endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol (2-AG), uye mafuta asidi amide hydrolase (FAAH), iyo enzyme yekutanga inoshatisa imwe mainendocannabinoid anandamide. An organophosphorous compound that inhibits MAGL and FAAH with IC50 values ​​of 0.8 and 3 nM, respectively.1 At 10 mg / kg, IDFP inosimudzira hutano hwe 2-AG neAEA kupfuura 10, uye inoderedza mazinga e arachidonic acid 10-fold.
Ichi chigadzirwa hachisi chevanhu kana chekushandiswa kwezvokurapa, kumwe kunyevera kuchiri kutsvaga. Dzivisa zvakananga kuganda, meso, mapfupa, kupora chero kupi zvako, tumira chiremba wako pakarepo.
IDFP (615250-02-7) Yakawanda Powder
I-IDFP Inobatsira Pamwe Chete
Iyo renal medulla, inofungidzirwa inonyanya kukosha kwekugadziriswa kwemunyu uye mvura inoyerera uye kwenguva refu yeropa rekudzivirira, inowedzera mu anandamide uye maviri ayo makuru makuru enzyme enzyme, cyclooxygenase-2 (COX-2) uye mafuta acid amide hydrolase (FAAH) . Kuvharirwa kwe anandamide (15, 30, uye 60 nmol · min-1 · kg-1) mu renal medulla yeC57BL / 6J mice yakasimudzira diuresis uye munyu wechuru muCXX-2-asi kwete COX-1. Kuti aone kana endogannabinoid inogumira mumaral medalla inogona kuita mamiriro akafanana, zvinokonzerwa ne intramedullary isopropyl dodecyl fluorophosphate (IDFP), iyo inhibisa maviri ekupedzisira endocannabinoid hydrolases, yakadzidzwa. IDFP mishonga yakakonzera urini maitiro ekugadzirisa uye sodium yakanyanya mu COX-2-asi kwete COX-1-inotenderera. Hazvinawo anandamide kana IDFP yakakonzera glomerular filtration rate. Nhamba yemagetsi (0.625 mg · kg-1 · 30 min-1 iv) kana intramedullary (15 nmol · min-1 · kg-1 · 30 min-1) IDFP kufambidzana mberi kwe intramedullary anandamide (15-30 nmol · min-1 · kg-1) zvakanyatsovharwa migumisiro ye anandamide, zvichiratidza kuti hydrolysis ye anandamide yakanga isingakwaniki pakuita kwayo diuretic. Intramedullary IDFP yakanga isina simba pamusoro pesimba rekubuda ropa asi yakakurudzira renal medullary ropa kufamba. Migumisiro yeDFFP pamusana wekuyerera kwechirwere uye medullary blood flow yaiva FAAH-inotarisirwa sezvakaratidzwa kushandisa FAAH kugogodza mice. Kuongororwa kwepinjini urinary PGE2 kuwirirana neHPLC-electrospray ionization tandem mass spectrometry yakaratidza kuti chirongwa cheDFFP chakaderedza urinary PGE2 Iyi data inopindirana nebasa re FAAH uye rinogumira anandamide richiita neCONX-2-inotenderera metabolite kuti igadzirise diuresis uye salt excretion mu mousekidney.
Nzira yekutenga IDFP powder (615250-02-7) kubva kuAASraw